» Ururka Haweenka Beesha Maxamuud Hiraab oo Nairobi Ku Doortay Hogaan Cusub +Sawirro
Ururka Haweenka Beesha Maxamuud Hiraab oo Nairobi Ku Doortay Hogaan Cusub +Sawirro
Jan 29, 2013 - jawaab	Aqrisatay:5421Xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay kasoo qeyb galeen Dhamaan Haweenka Beesha Maxamuud Hiraab ayaa ka dhacay Magaalada Nairobi iyadoona kulankaan ay Haweenka Beesha ku doorteen Gudoon Cusub.
Kulan kan ka dhacay Magaalada Nairobi oo ay isugu yimaadeen qaar kamid ah haweenka Beesha Maxamuud hiraab ayaa waxa ay doorteen Gudoomiye cusub kaas oo hogaamin doona Jaaliyada Haweenka Beesha iyagoona u doortay Hibo rooble.
Sidoo kale xafladaan lagu doortay Gudoomiyaha Haweenka Beesha Maxamuud Hiraab ayaa waxa goob joog ka ahaa Odayaal Siyaasiyiin iyo Dhalinyarada Beesha Maxamuud Hiraab waxayna dhamaantood soo dhaweeyeen Hogaanka Cusub oo ay yeeshaan Haweenka Beesha Maxamuud Hiraab.
Haweenka Ka soo Qeybgalay xalfadii lagu doortay Gudoomiyaha Haweenka Beesha Maxamuud Hiraab ayaa tiradooda lagu qiyaasay ilaa 100-haween ah waxayna qaarkood ay halkaasi ka jeediyeen qubado kala duwan kuwaas oo badankooda u muuqanaayay kuwo lagu taageeraayay Gudoomiyaha Cusub ee Ururka Haweenka Beesha Maxamuud Hiraab Marwa Hibo Maxamed Rooble.
Marwo Hibo Rooble ayaa Markii loo doortay Gudoomiyaha Haweenka Beesha Maxamuud Hiraab la hadashay dadki ka soo Qeybgalay Xaflada iyo Saxafiyiinta waxa ay kawar bixisay dareenkeeda ku aadan Gudoomiyanimada loo doortay waxayna sheegtay inay soo dhaweynayso xilka loo dhiibay.
Ugu dambeyn Marwo Hibo Rooble ayaa hoosta ka xariiqday inay wax badan ka qaban doonto dhibaatada heysta Haweenka Beesha waxayna tixgabay ah oo isugu jirta baraarujin iyo dhiirigalin ay u jeedisay haweenka Beesha Maxamuud Hiraab.
W/Q: Cabdi Shakuur Faarax Cigale